AH: Ballast Water Management (BWM)
ခုနောက်ပိုင်းမှာ လူပြောများလာတဲ့ Ballast Water Management (BWM) အကြောင်းလေးကို အနည်းငယ်တင်ပြလိုပါသည်။ အဓိက အချက်ကတော့ သင်္ဘောများမှာ ပင်လယ်ရေကို အသုံးပြုပြီး သင်္ဘော တည်ငြိမ်မှု့အတွက်သောလည်းကောင်း၊ ကုန်စည်တင်ဆောင်ရာတွင် သင်္ဘော၏ ဟန်ချက်ကို ထိန်းပေးနိုင်ရန်အတွက်သောလည်းကောင်း အသုံးပြုသော Ballast Water များကို စွန့်ပစ်ရာမှ စတင်ပါသည်။ သင်္ဘောများသည် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ခုတ်မောင်းနေသောကြောင့် ဒေသတစ်ခုမှ ပင်လယ်ရေများကို တင်ဆောင်လာပြီး အခြားဒေသတစ်ခုတွင် စွန့်ပစ်ကြသည်။
တင်ဆောင်လာသော ပင်လယ်ရေထဲတွင် ဒေသတစ်ခုမှ သက်ရှိ မျိုးစိတ်များ၊ အပင်များ၊ ပင်လယ်နေ အကောင်ငယ်များသည် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ သင်္ဘောထဲရှိ Tank များထဲတွင် ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်သည်။ သင်္ဘောများသည် အခြားဒေသ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းတွင် ပင်လယ်ရေများကို စွန့်ထုတ်သောအခါ အဆိုပါ အကောင်များ၊ အပင်များ၊ မျိုးစိတ်များလည်း ရောပါသွားသည်။ အကျိုးဆက်ရလဒ်မှာ စွန့်ထုတ်လိုက်သော ရေထဲရှိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော မျိုးစိတ်များသည် စွန့်ထုတ်လိုက်ရာ ဒေသရှိ ဒေသခံမျိုးစိတ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးသွားပြီ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် တည်ငြိမ်နေမှု့ကို ပျက်ပြားစေသည်။
ထိုသို့သော အချက်များကြောင့် IMO (International Marine Organizatioin) နှင့် WHO (World Health Organization) ကဲ့သို့သော အဖွဲ့ကြီးများမှ ပင်လယ်ရေမှ တဆင့် လျှင်မြန်စွာ ကူးစက်ပြန့်နှံစေနိုင်သော ဘက်တီးရီယားများ (epidemic disease bacteria) များကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလာကြသည်။
အောက်ပါပုံတွင် သင်္ဘောများကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ပင်လယ်ပြင်တွင် ပေါက်ဖွားရှင်သန်သော အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော အကောင်များ ပြန့်နှံပုံကို လေ့လာနိုင်သည်။
Download လုပ်လိုပါက http://www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Documents/LINK%2014.pdf အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပြီး Download ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး IMO မှ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်များကို အနည်းငယ် အကျဉ်းချုံးပြီး ဖော်ပြလိုပါသည်။ IMO ၏ MEPC (Marine Environment Protection Council)မှ လောလောဆယ် BWM Convention ၁၅ခုကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
Guidelines for sediment reception facilities (G1) (resolution MEPC.152(55))
Guidelines for ballast water sampling (G2) (resolution MEPC.173(58))
Guidelines for ballast water management equivalent compliance (G3) (resolution MEPC.123(53))
Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4) (resolution MEPC.127(53))
Guidelines for ballast water reception facilities (G5) (resolution MEPC.153(55))
Guidelines for ballast water exchange (G6) (resolution MEPC.124(53))
Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention (G7) (resolution MEPC.162(56))
Guidelines for approval of ballast water management systems (G8) (resolution MEPC.174(58))
Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) (resolution MEPC.169(57))
Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water treatment technology programmes (G10) (resolution MEPC.140(54))
Guidelines for ballast water exchange design and construction standards (G11) (resolution MEPC.149(55))
Guidelines on design and construction to facilitate sediment control on ships (G12) (resolution MEPC.150(55))
Guidelines for additional measures regarding ballast water management including emergency situations (G13) (resolution MEPC.161(56))
Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (G14) (resolution MEPC.151(55))
Guidelines for ballast water exchange in the Antarctic treaty area (resolution MEPC.163(56)) တို့ဖြစ်ကြသည်။
Approval of Ballast Water Management System အောက်မှာ G8, G9 နှင့် G10 တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပြီး
Ship Operation Guidelines တွေနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကတော့ G2, G4, G6 နှင့် G3 တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Ship Design Guidelines တွေနဲ့ပါတ်သတ်တာတွေက G11 & G12, Administration Guidelines တွေကတော့ G7, G13 နှင့် G14 အောက်မှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ BWM Convention က စတင်အသက်ဝင်တော့မှာ(Enter into force)ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ enter into force ဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ရဲ့ ထောက်ခံချက်ရရှိရန်လိုအပ်ပြီး လောလောဆယ် (1 May 2011)အထိ နိုင်ပေါင်း ၂၈နိုင်ငံပါဝင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Enter into force ဖြစ်တာနဲ့ အဓိက နှစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားလာရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
D-1 ဆိုတာက Ballast Water Exchange ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး
D-2 ဆိုတာက Ballast Water Treatment ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ၂မျိုးကို BWM Convention စတင်အသက်ဝင်တာနဲ့ သင်္ဘောတိုင်းမှာ လိုက်နာဖို့ ထည့်သွင်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကဇယားကတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စီမံချက်ဆွဲထားတာပါ။
၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်တဲ့သင်္ဘောတွေမှာ BWT (Ballast Water Treatment) systems တွေကကို တပ်ဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် အထိ Ballast Water Treatment Techonology မှာ Type Approval ၁၇ ခုအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောများမှာ တပ်ဆင်တဲ့အခါ Approve ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ပါအဆင့်တွေလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်..
Prior approval from Administration required
- Type Approval Certificate
- Approved Ballast Water Management Plan
- Approved ship-specific Operation and Technical manuals
- Confirmation that electronic and control of BWT system have been typed tested – issued by Admin or test lab
Documents to be onboard during survey
- Ballast water record book
- Installation specification and commissioning procedures
(Installation survey to verify installation and commissioning are in accordance with Manufacturer Specification)
ဒါကတော့ BWM နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အကျဉ်းချုပ်သတင်းလေးပါ။ သင်္ဘောတည်ဆောက်နေသူများ၊ BWT စက် တင်သွင်းလိုသူများ အတွက် အတန်အသင့် လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက www.imo.org သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ကြပါကုန်။
Posted by AH at 8/15/2011 10:55:00 PM
T July 23, 2012 at 6:26 AM
ရေးထားတဲ့ Blog Post တွေအကြောင်းကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ ဘလော့ဂါတွေ ပြောသမျှမှာ အစီအစဉ်လုပ်ချင်ပါတယ်၊ ဝေမျှပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်လို့ ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ် သိချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါ။
လေ့လာမှတ်သား အင်ဂျင်နီယာလောကရဲ့ စကားများ
၀တ်ကြဦးမလား အဲကွန်း ဂျာကင်
ပထမဆုံး ချစ်သူ့ အနမ်းချွေအပြီးမှာသေဆုံးသွားတဲ့ မိန...
အမေရိကန် သမ္မတများရဲ့ ကလေးဘ၀ ဓာတ်ပုံများ
ဆိုးပေ - ၀န်ကြီးချုပ်
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး ရေငုပ်သ...
တရုတ်ပြည် တက္ကသိုလ်ဝင် စားမေးပွဲ၌ ခိုးချရန် ပံပိုးခ...
Duel-Fuel Engines သို့မဟုတ် LNG ရွှေခတ် ရောက်ပြီလား ?
ကိုရီယားစကားကို ပီပီသသ ပြောနိုင်ဖို့ လျှာကို ခွဲစိ...
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး လေယဉ်တင်သင်္ဘော